Madaxweyne Xasan Sheekh “Looma doodi karo Alshabaab lasoo xiray” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
16th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed aysan xaajo uga daba imaanin xubnaha ka tirsan Alshabaab ee ay soo xirto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
“Qofka Al-Shabaab lagu soo eedeeyay ee xiran, waa la soo deynaa haddii wax lagu waayo isagoon dhib qabin, dhaaf halla baaree, fursad sii ciidammada amniga” ayuu yiri madaxweyne Xasan oo ka hadlayey munaasabadda 15-ka May.
Wuxuu sheegay in haddii qofkii la tuhmo uu waalidkiis ama masuuliyiin kale ay ay daba socdaan oo ay culeys saaraan hay’adaha amniga ay la micno tahay inay fursad siinayaan Alshabaab.
“Marka wiilka aad adeerka u tahay aad daba kacdo, Al-Shabaab ayaad gacan siisay. Dhibaato ayay arrintaasi ku haysaa amniga iyo dagaalka lagula jiro kooxaha nabad diidka ah” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal badan ku bixinayso xoojinta iyo tayaynta hannaanka amniga iyo garsoorka dalka, si ay muwaadiniintu u helaan caddaalad kuwa dhibka wadana looga guuleysto.
“Waxaan ku dadaalaynaa inaan horumarinno habkeena garsoorka, habkeena amniga inay horumaraan, waana hormarayaan oo waa sii soconnaa, laakin dagaalku naguma simayo, dagaalka waan ku jirnaa, waa inaan ku guuleysanaa oo aan ka adkaanaa nimankaan (Al-Shabaab) ileen waan ka adagnahaye, Laakin si ay taasi u dhacdo wiilka aad adeerka u tahay ee aad daba socoto ka har” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Marka dowladda Soomaaliya xirxirto dad laga shakiyey waxaa u dooda odayaasha uu kasoo jeedo iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ku beesha ah ee ku jira dowladda Soomaaliya.
Sawirro: Daacish oo qabsatay Ramadi & ciidamada Ciraaq oo ku rogaal celiyey